Dadka: Ha u isticmaalin dawada gooryaanka dulin-dilaha ah COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Dadka: Ha u isticmaalin dawada gooryaanka dulin-dilaha ah COVID-19
Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Daawooyinka xoolaha looma jeedin aadanaha
Caafimaadka Kanada waxay codsi deg-deg ah u dirtay muwaadiniinteeda inaysan u adeegsan dawooyinka dhakhtar qoro ee loo yaqaan Ivermectin si loogu daweeyo COVID-19 ama ay isku dayaan inay ka hortagaan qaadista coronavirus.
Ivermectin waa wakiil antiparasitic ah oo ah qaab kiniin ah, dhejin, xal afka ah, xalka laysku duro, dawada daawada, ama la mariyo.
Health Canada ayaa bayaan u soo saartay muwaadiniinteeda iyadoo leh haddii dawadan loo iibsaday ujeeddadan, isla markiiba iska tuur.
Xirfadlaha daryeelka caafimaadka waa in lala tashadaa haddii sheygan la isticmaalay oo ay jiraan walaacyo caafimaad.
Bini -aadamka oo adeegsanaya dawooyinka xayawaanka ama qaabab kale ayaa ah wax cusub marka laga hadlayo welwelka caafimaadka. Madaxa Ururka Dhakhaatiirta Hindida ayaa ku qasbanaaday inuu uga digo muwaadiniinta Hindiya dhaqanka ku aaddan inay isqariyaan digada lo'da iyo kaadida oo la isku daray sida dawada coronavirus.
Caafimaadka Kanada waxay heshay warbixinno khuseeya adeegsiga ivermectin xoolaha si looga hortago ama loo daweeyo COVID-19. Dadka reer Kanada waa inaysan waligood isticmaalin alaabada caafimaadka ee loogu talagalay xayawaanka sababta oo ah khataraha caafimaad ee halista ah ee ay keeni karaan.
Markay sidan tahay, Health Canada waxay kula talineysaa dadka Kanada inaysan isticmaalin midkoodna noocyada dawooyinka xoolaha ama dawooyinka dadka ee Ivermectin si looga hortago ama loo daweeyo COVID-19. Ma jiraan wax caddayn ah in ivermectin labada qaabba ay ammaan tahay ama waxtar leedahay marka loo isticmaalo ujeeddooyinkaas. Nooca aadanaha ee ivermectin waxaa loo oggol yahay in lagu iibiyo Kanada oo keliya si loogu daaweeyo cudurrada gooryaanka dulinka ah ee dadka.
Nooca xoolaha ee ivermectin, gaar ahaan qiyaasta sare, waxay khatar ku noqon kartaa bini -aadamka waxayna u keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad oo daran sida matag, shuban, dhiig -karka, dareen -celinta xasaasiyadda, wareer, suuxdin, miyir -beel, iyo xitaa dhimasho. Badeecadaha Ivermectin ee xayawaanku waxay leeyihiin qadar aad u xoog badan marka loo eego alaabta ivermectin ee dadka. Waaxdu waxay ka warqabtaa warbixino badan oo ku saabsan bukaanno ku nool Mareykanka kuwaas oo u baahnaa taageero caafimaad oo isbitaal la dhigay ka dib markay isticmaaleen ivermectin loogu talagalay fardaha.
Caafimaadka Kanada waxay si dhow ula socotaa dhammaan daweynta suurtagalka ah ee daaweynta COVID-19, oo ay ku jiraan daaweynta lagu barto tijaabooyinka caafimaad ee caalamiga ah. Illaa iyo hadda, Caafimaadka Kanada ma helin wax soo-gudbin dawayn ah ama codsi tijaabo caafimaad ah oo loogu talagalay ivermectin ka-hortagga ama daaweynta COVID-19.
Daawooyinka awood u leh inay gacan ka geystaan ​​daaweynta COVID-19, Caafimaadka Kanada waxay ku dhiirri-gelisaa soo-saareyaasha dawooyinka inay sameeyaan tijaabooyin caafimaad. Tani waxay fursad siin doontaa bulshada daryeelka caafimaadka si ay u ururiyaan macluumaadka waxtarka daaweynta iyo khataraha la xiriira.
Haddii soo-saaruhu uu u soo gudbiyo Caafimaadka Kanada oo la xidhiidha adeegsiga ivermectin si looga hortago ama loo daweeyo COVID-19, Health Canada waxay samayn doontaa qiimayn saynis ah oo caddaymaha si loo go'aamiyo tayada, badbaadada, iyo waxtarka dawada.
Health Canada waxay sii wadi doontaa inay la socoto xaaladda waxayna qaadi doontaa tallaabo habboon oo ku habboon waqtigeeda haddii macluumaad cusub la helo, oo ay ku jiraan macluumaad kasta oo ku saabsan xayaysiinta sharci darrada ah ama iibinta ivermectin. Health Canada ayaa sidoo kale la socodsiin doonta wixii macluumaad badbaado ah ee cusub xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo macaamiisha.
Caafimaadka Kanada ayaa horay uga digtay dadka Kanada wax ku saabsan alaabooyinka sameeya sheegashooyinka beenta ah ee marin habaabinta ah si loo daaweeyo ama loo daweeyo COVID-19. Macluumaad ku saabsan Caafimaadka Kanada tallaalada iyo daaweynta la oggolaaday, booqo Canada.ca.
Ivermectin, oo ah dawada dhakhtar qoray, ayaa loo oggol yahay in lagu iibiyo Kanada si loogu daaweeyo cudurrada gooryaanka dulinka ah ee bini -aadamka, gaar ahaan hardyloidiasis xiidmaha iyo onchocerciasis, waana in loo adeegsadaa ujeeddadan kaliya, iyada oo uu kormeerayo xirfadle daryeel caafimaad. Nooca xoolaha ee dawadan ayaa la heli karaa si loogu daaweeyo caabuqyada dulin -ka ee xayawaanka. Dadku waa inaysan waligood isticmaalin nooca xoolaha ee badeecadan.
Waxa macaamiishu ay tahay inay sameeyaan
Haddii ivermectin loo iibsaday ka-hortagga ama daaweynta COVID-19, jooji isticmaalkiisa oo iska tuur. Raac tilmaamaha degmada ama gobolka ee ku saabsan sida loo tuuro kiimikooyinka iyo qashinka kale ee halista ah, oo ku soo celi badeecada meesha lagu iibiyo si habboon loo tuuro.
La tasho xirfadle daryeel caafimaad haddii ivermectin la isticmaalay oo ay jiraan walaacyo caafimaad. Si toos ah ugu sheeg Caafimaadka Kanada waxyeellooyin kasta oo ka yimaad badeecadan. U soo gudbi cabasho Caafimaadka Kanada haddii macluumaad kasta oo ku saabsan xayeeysiinta sharci darrada ah ama iibinta ivermectin ama alaab kale oo caafimaad oo la isticmaalayo foomka cabashada ee internetka la ogaado.